Mariin MM Abiy Ahimad aanga'oota TPLF waliin taasisan waa milkaa'ee? - BBC News Afaan Oromoo
Sanbata darbe kora Koree Hoji-raawwachiiftuu ADWUI taasifamee turerratti Addichi akka walitti baqu sagalee caalmaan yeroo raggaasisu warreen TPLF irraa dhufan mormanii akka turan ni yaadatama.
Miseensonni TPLF ja'a sagalee akka hin kenniin himamee ture.
Korri kun itti fufuun Dilbata taa'amee kan ture yoo ta'u kora ture sanarrattis miseensonni koree hoji-raawwachiiftuu TPLF irratti hin argamne.
Dura ta'aan ADWUI MM Abiy Ahimad miseensota koree hoji-raawwachiiftuu TPLF kana waliin addatti haasa'uuf akka jiran aanga'aan TPLF Obbo Asmallaash Waldesillaasee dubbachuu isaanii BBCn gabaasee ture.
Akkuma jedhames, ministirri muummeefi koreen hoji-raawwachiiftuu TPLF adeemsa walitti baquu ADWUI ilaalchisee garaa garummaa ilaalchaa uumame waliin mariyachuu isaanii maddeen Addichatti dhiyoo ta'an BBCf mirkaneessaniiru.
Odeeffannoon BBCn Kibxata waajira TPLF irraa argate akka agarsiisutti waa'ee walitti baquu ADWUI ilaalchisuun Dilbata darbe ministira muummee waliin taasisanii turan akka hin milkaa'iin hafedha.
Marii ministirri muummee Abiy Ahimad waliin miseensonni koree hoji-raawachiiftuu TPLF mariyatan kunneen warra Sanbata darbe kora hoji-raawwachiiftuu ADWUI irramatan ture.
MiseensotaTPLF sadet kora Sanbataa sanarratti argaman keessaa namni tokko sababii hojii ariifachiisatiif gara Maqaleetti deebiyanilleen warreen hafan hunduu waliin mariyataniiru.
Maal marii'atan? Bu'aansaa hoo?
BBC'n maricha ilaalchisee odeeffannoon waajjira ADWUI'tii argateera. Haaluma kanaanis miseensoonni TPLF irra deebii'anii akka itti yaadaniifi addicha waliin akka hojjataniif Ministira mummeetiin gaaffiin dhiyyaateef akka ture mullisa.
Haa ta'u malees miseensoonni TPLF walgahii Sanbataa irratti kan hrmaatan ejjannoo dhimmi walitti baquu duraan qabataniin alatti kan geedaran akka hinjirre himuun, murteesaaniin waan dhaabbataniif mariachi bu'aa qabatamaa osoo hin buusiin dhumuu ibsameera.
Kanaafuu walgahiin dhaabbattichaa jara sadaniin walitti baquu deegaraniin gaggeefamaa tures hanga Wiixata kaleessaatti itti fufuun walgahiisaa xumuree dhimmicha gara waajjira mana mareetti akka dhiyaatuuf murteessuu ibsameera. Ministirri Mummee Abiy fuula feesbuukii isaanirratti akka barreessaniitti, wixinee paartii walitti baqee irratti mari'achuun akka ragaasisan himanii, 'gara mana mareetti ergamuuf murtessineera' jedhaniiru.
Itti dabaluunis, ''mariin guyyoota sadaniif haala ifaafi dimokraatawa ta'een' gaggeefameera. Marichiis oggantoota caalaa kan walitti dhiheessee ta'ee xumuramuusaatiif gammachuutu natti dhagahama,'' jechuun mariisaanii waliigalteen xumuramu himaniiru.
Kanaan boodas TPL, miseensoota adda warra hafaniifi dhaabbilee deegartootaa gama koree hojii raawwachiftuutiin waan xumuramee, waltajjii mana maree AWWUI itti aanu irratti mari'achu akka danda'an eegama.
Yaada dhimmi walitti baquu yeroo dheeraaf qoratamaafi eegamaa ture irratti miseensoonni addichaa kan biraa fi dhaabbileen deegarsaa kan deeggaaran yoo ta'u, TPLF garuu sagantaa Warraaqsa Dimokraasiitiin itti fufuun qaba jechuusaatti garaagarummaan umameera.
TPLF yaaliin walitti baquu kunis ''sirna bulchiinsa waan hundi tokkoo ta'e hundaa uumuun aangoorra turuuf kan taasifamuudha'' yoo jedhan, kanneen walitti baqiinsa deegaraan ammo, ''barbaaddoota sagantaa haaraa jijjirama waliin demuu'' ta'u himu.
Ministirri mummee Abiy Ahimad fi ooggantoonni dhaabbilee walitti baquu kana deegaran kan biraa, gama isaanitiin sirna bulchiinsa waanti hund tokko ta'eekan nhinfinnee fi federaalizimii sab'daneessa kan itti fufiinsuudha akka ta'u caqasuun bu'aa walitti baquu himu.
BBC'n marii MM Abiyiifi miseensoota koree hojii raawwachiftuu TPLF jidduutti taasifame ilaalchisuun odeeffannoo argachuuf waajjira MM gaafatulleen dhimmichi waajira addichaa akka ilaalattu itti himameera. fiixaan osoo hinbahiniif hafeera.
Kana malees yaaliin dhimmicharratti odeeffannoo waajjira ADWI irraa aragachuuf taasine nuuf hinmilkoofne.
Poolisiin namoota dubartii gudeeduun shakkaman afur ajjeese